Miyey kooxda Arsenal doonaysaa inay heshiis cusub ka saxiixato Danny Welbeck? – Gool FM
(London) 27 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso suurto-galnimada ay heshiis cusub uga saxiixanayso Danny Welbeck.
Weeraryahankan ayaa afar sano iyo barkii la soo dhaafay ku qaatay garoonka Emirates, laakiin 28-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku eg yahay xagaaga.
Dhaawacyo uu la dhibtoonayey Welbeck ayaa sababay inuu kaliya 88 kulan uu safto horyaalka Premier League tan iyo bishii September sanadkii 2014-kii, laakiin xiddiga xulka qaranka England ayaa diiday inuu ka tago Gunners.
Yeelkeede, Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in kooxda Arsenal ay isku diyaarinayso inay dalab cusub oo ay heshiiska uga cusboonaysiisanayso hordhigto Welbeck, iyadoo tababare Unai Emery uu jecel yahay ciyaaryahankan.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Welbeck laga yaabo inuu aqbalo mushahar hooseeya ama inuu mushaarkiisa hoos u dhigo haddii uu sii joogayo kooxda ka dhisan Waqooyiga Magaalada London dhammaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo Weeraryahanku uu dhaawac ku seegay garoomada dhowr bilood kaddib markii uu jabsaday Canqowga.
Kooxaha Everton, West Ham United iyo Newcastle United ayaa la warinayaa inay diiradda ku hayaan xaaladda xiddigan, iyagoo raba inay ka kaxaystaan garoonka Emirates.